M/weyne Faroole oo xarigga ka jaray madaarka cusub ee Garowe & madax kale oo ka hadashay baahida & dhismaha madaarka Garowe. – Radio Daljir
Agoosto 17, 2010 12:00 b 0
Garowe, Aug 17 – M/weynaha Puntland C/raxmaan M. Faroole ayaa maanta xariga ka jaray madaarka cusub ee Garowe. M/weyne Faroole oo ka xog waramay ahmiyada madaarku u leeyahay horumarinta dhaqaale iyo bulsho ee Puntland ayaa sheegay in madaarka lagu dhisay iskaashi dhex maray hay’adaha gaarka ah iyo kuwa khaaska ‘private-public partnership’. Wasiirka madaarada & dekedaha Puntland Axmed Karaash oo isna ka hadlay ayaa sheegay in …
Kawaanka Dadka – Waa hees cabiraysa dilka, dhaca iyo boobka ay rayadka ku hayaan inta aan u nixin shacbka; waxaa curiyey Cabid Jaamca Shire, waxaa ku luuqaynaya kooxda Qaylo Dhaan …